Amacandelo kwi-Ubunlog | Ubunlog
Igama lebhlog livela kwindibano yamagama Ubuntu + Blog, ke kule blog unokufumana zonke iintlobo zolwazi malunga noBuntu. Uya kufumana iinkqubo, izifundo, ulwazi ngesixhobo, nokunye okuninzi. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo kwibhlog yangoku, uya kufumana ezona ndaba zibalaseleyo malunga noBuntu kunye neCanonical.
Ayisiyiyo loo nto kuphela. Nangona esona sihloko siphambili kule bhlog sithi Ubuntu nayo yonke into enxulumene nale nkqubo yokusebenza, uya kufumana iindaba zokuhanjiswa kweLinux, nokuba zisekwe kwi-Ubuntu / Debian okanye hayi. Kwaye kwicandelo leendaba sikwapapasha, phakathi kwezinye izinto, okuzayo, udliwanondlebe nabantu ababalulekileyo kwilizwe leLinux okanye indlela yenkqubo yophuhliso lwekernel.
Ngamafutshane, kwi-Ubunlog uyakufumana ulwazi ngazo zonke iintlobo malunga nelizwe liphela leLinux, nangona into eza kubakho phambili iya kuba ngamanqaku malunga noBuntu, incasa yawo esemthethweni kunye nolwabiwo olusekwe kwisoftware ephuhliswe yiCanonical. Apha ngezantsi, ungawabona amacandelo esijongana nawo kunye nalawo wethu Iqela labahleli ihlaziywa mihla le.
Ulwabiwo olusekwe kubuntu